Gxila ekunikezeni isevisi
Kwenziwe ngentando amabhele angajwayelekile
Amabheringi angewona ajwayelekile athephiwe
Amabhere ebhola azacile
Izithuthi ezithwala impompo yamanzi
Umkhono we-shaft ngokwezifiso
"Ikhwalithi yomkhiqizo ozinzile, ukudala ibhizinisi elisezingeni lokuqala, nokwanelisa izidingo zamakhasimende zokusetshenziswa" kuyinkambiso engapheli yenkampani, futhi "ikhasimende kuqala, idumela kuqala" kuyinjongo yenkampani yethu yaphakade.
Inkampani izonikeza abasebenzisi izimpendulo zobuchwepheshe bezinsuku zonke ukusiza abasebenzisi ukuxazulula noma yiziphi izinkinga abahlangabezana nazo kumkhiqizo nakuhlelo.
Uma nje ukhetha imikhiqizo yethu, izonikezwa mahhala futhi ikuqondise ukuthi uyisebenzise, ​​futhi izothunyelwa ngokushesha okukhulu.
UJan 28, 2021
Amabhere angajwayelekile Amabhere abalulekile futhi ayizinto ezisemqoka ezisemqoka embonini yokukhiqiza imishini, enquma ngqo ukusebenza, ikhwalithi kanye nokwethembeka kwemishini emikhulu nemikhiqizo yokusingathwa, futhi yaziwa njengezakhi "zenhliziyo" zokwenziwa kwemishini. I-Af ... / p>
Zonke izinhlobo zezibazi ezenziwa ngomshini, njengokulimala, ukuklwebheka, ukulimala kwengcindezi, imihuzuko, njll., Kuzodala ukufakwa okungekuhle, kubangele imithwalo eccentric kanye nokuhlushwa kwengcindezi, futhi kudale ukwehla kokunemba kokujikeleza nempilo yesevisi. Ukugqwala, isikhumba esimnyama, nokugwaza, lezi ezimbili zokugcina zingu-d ... / p>